China Fuel Tanker API Camlock Coupling Adapter စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Jiasheng
API Gravity Drop adapter API valve နှင့် connector အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Excharging efficiently.The Oblique angle ဒီဇိုင်းသည်ဆွဲအားအလွန်သန့်ရှင်းစေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်ဆွဲအားသည်အဆင်ပြေသည်။ ၎င်းသည်ချသည့်အခါပျော့ပျောင်းသောပြွန်ကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
Female coupler နှင့် oil drain valve သည် API Rp 1004. standard နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည် standard API coupler နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မြင့်မားသောသံချေးမခံခြင်း၊
ထုတ်ကုန်အမည် အရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိ API Adapter
ပစ္စည်း ကိုယ်ခန္ဓာ အစွန်းခံသံမဏိ
အမည်ခံအချင်း 4″ - 2.5″ /44 -3″ / 4″ -4″
Tempreture: -150 ° F မှ + 250 ° F အထိ
အလယ်အလတ်: ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ရေစသည်
လုံခြုံမှုနှင့်အမြန်တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းတို့ကိုသေချာစေရန် API အောက်ခြေ adapter အတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းသည် API adapter coupler ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်း 'နှုတ်' ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ Standard 4″ API RP-1004 တင့်ကားထရပ်ကားများနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။
အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်မှုများကိုကျေနပ်စေရန်အရွယ်အစားသုံးမျိုး (2.5″ 3″ 4″) ရှိပါသည်။ ရေငွေ့ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လုပ်သောအရာသည်အခိုးအငွေ့အဖြစ်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်သောအခါအငွေ့ adapter Valve.Brass လက်ကိုင်ဒီဇိုင်းကိုဖွင့်သောအခါအဆင်ပြေပါသည်။ အဆိုပါငွေ့ Adapter Valve ။
ရေနံတင်သင်္ဘောမှလောင်စာချသည့်အခါ Camlock coupler သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသည်ချခြင်းအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်ဆေးကြောရန်အဆင်ပြေသည်။ ကွေးမရပိုက်ကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပါ။ Female-Coupler interface သည် API RP1004 လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ standard API Coupler နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
1.Gravity Drop စုံတွဲ
Gravity Drop Coupler သည်ချရသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။ အဆိုပါ Oblique ထောင့်ဒီဇိုင်းကိုဆွဲငင်အားမှဆင်းအများကြီးသန့်စင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အဆင်ပြေသည်။ ချသည့်အခါရေငုပ်ခြင်းခံရဖို့မထိနျးသိမျး။ Female-Coupler interface သည် API RP1004 လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်၊ standard API Coupler နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
* Hardening Treatment - အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးသည်၎င်း၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်စေရန်အထူးခိုင်မာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
* ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း - Oblique angle ဒီဇိုင်းသည်ဆွဲငင်အားမှထုတ်လွှတ်သောအရာများအတွက်အဆင်ပြေပြီးစွန့်ပစ်ထားသောရေပိုက်များကိုထိရောက်စွာကာကွယ်သည်။
* စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား - Interface အတိုင်းအတာကို API RP1004 စံနှုန်းအရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ပေါ့ပါးခြင်း - အဓိကကိုယ်ထည်ကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးခိုင်ခံ့သည်။
* အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသေ - သွန်းဖွဲ့စည်းပုံ, anodized ကုသမှု။
စာနယ်ဇင်းများမှတပ်ဆင်ထားသော Cam သော့ခတ်ခြင်းလုပ်ငန်း။
အောက်ဖက်သို့ 22.5 ထောင့်ရေနံထိန်းသိမ်းမှုကိုလျှော့ချ။
Cam နှင့် free-floating တို့သည်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ကွေးခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
* lamellar မျက်မှန်များမှတဆင့်စီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။
* API1004 စံနှင့်တွေ့ဆုံသည်။
ပစ္စည်း ကိုယ်ခန္ဓာ လူမီနီယံ
operating နည်းလမ်း စက်မှု
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်4× 2.5 လက်မ,4×3လက်မ,4×4လက်မ
အလယ်အလတ်: ဓာတ်ဆီ၊ ရေနံဆီ၊ ဒီဇယ်
ဆွဲငင်အား Drop Coupler
လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်လျင်မြန်စွာတင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းတို့ကိုသေချာစေရန် API အောက်ခြေ adapter အတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်း။ ၎င်းသည်အတွင်းပိုင်း 'နှုတ်' ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ Standard 4″ API BR-1004 tank adapters များနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သည်။
ကိုင်တွယ် - ကြေးနီ
ပင်မ - သံမဏိ
1. လူမီနီယမ်အလွိုင်းသေ - သွန်းဖွဲ့စည်းပုံ, anodized ကုသမှု။
၂။ Cam သော့ခတ်ခြင်း၊ နှိပ်၍ ထည့်သွင်းခြင်း။
အောက်ဖက် 3. 22.5 ထောင့်ရေနံ retention ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
၅။ Cam နှင့် free-floating တို့သည်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ကွေးခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
၆။ lamellar မျက်မှန်များမှတဆင့်စီးဆင်းမှုကိုစစ်ဆေးရန်လွယ်ကူသည်။
8. API1004 စံနှင့်တွေ့ဆုံသည်။
အရွယ်အစား:4* 4,4* 3,4* 2.5
operating နည်းလမ်း: စက်မှု
အပူချိန်အကွာအဝေး -20 ~ + 70 ℃
ချိတ်ဆက်နေသည် - ထစ်
ရှေ့သို့ ငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Coupler
နောက်တစ်ခု: Frence API Adapter Valve ကို
API Camlock ချိတ်ဆက်မှု Adapter